नाइजेरिया दक्षिणपूर्वी पश्चिम अफ्रीका मा एक देश छ. यसलाई अफ्रीका मा सबै भन्दा ठूलो जनसंख्या र अफ्रीका मा सबै भन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था हो. देश तीव्र विकास एक अवस्थामा छ. त्यहाँ चीन मा उत्पादन औद्योगिक मिसिन उपकरण लागि एक विस्तृत माग छ. यो ठूलो विकास क्षमता संग एक देश छ.
नाइजेरिया caustomers हाम्रो मिसिन किनेको (Lathes, मिलिंग मिसिन, मशीनिंग केन्द्र) मा 2015. किनभने स्थानीय स्थान र शक्ति प्रतिबन्ध को, तिनीहरूले भएको छैन प्रयोगमा. यो समय हाम्रो कम्पनी \_ 'को ईन्जिनियरहरु तिनीहरूलाई डिबग गर्न मद्दत र तिनीहरूको कर्मचारीहरु सिकाउन निमन्त्रणा कसरी मेशिन प्रयोग एक सुरक्षा अवस्थामा.
यस प्रक्रियामा, हामी सधैं मात्र उच्च गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा बजार को परीक्षण सामना गर्न सक्छन् भन्ने लाग्यो. हाम्रो कम्पनी द्वारा उत्पादित उपकरण तीन वर्षसम्म प्रयोग गरिएको छैन, र यो पछि सामान्यतया सञ्चालन शक्ति-मा. काटन प्रभाव कारखाना मानक जस्तै हो. यो ग्राहकहरु को पहिचान जित्यो छ. पनि स्थानीय बजार मा एक राम्रो प्रतिष्ठा स्थापित.
हामी थप र थप नाइजेरिया स्थानीय ग्राहकहरु परामर्श र हाम्रो उपकरण खरिद गर्न आउनेछ विश्वास. हाम्रो गुणवत्ता र सेवा स्थानीय बजार मा राम्रो प्रभाव पार्न हुनेछ.
अघिल्लो:उद्धार अनुकूलित मिसिन
अर्को:सीएनसी मशीनिंग VMC ......